PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-28 - Uthi kushintshe okuningi ethola ingane
Uthi kushintshe okuningi ethola ingane
Ubonga nokwesekwa nguyise wayo ekuyikhuliseni
Ilanga langeSonto - 2018-10-28 - Izindaba - THANDI ZONDI
ISIPHALAPHALA esingumlingisi emidlalweni kamabonakude, ujessica Nkosi, sitshele ILANGA Langesonto ukuthi siyakuthokozela ukuba ngu- mama njengoba sisanda kuthola umntwana.
Ujessica uthi yize ukuthola umntwana kuze noshintsho olukhulu empilweni yakhe, kepha akafisi ukushintsha nokukodwa ngesimo akusona njengamanje sokuba ngumama. Ukugcwala kwakhe injabulo ngokuba ngunina kanamisa, kubonakala ngisho ekhasini lakhe enkundleni yokuxhumana.
Uthi yize abantu bebona le ngxenye yokujabula empilweni yakhe, kodwa kuningi abanga-kuboni.
“Ukukhulisa umntwana kuza nezinselelo eziningi. Uma ngigeza kumele ngisheshise (ngimbheke), kumele ngimdlalise, ngimncelise. Ngaphezu kwalokho unamisa akalali, ufuna ukulala uma ngiseduze kwakhe. Konke lokho ngiyakuthokozela,” kuchaza ujessica owaziwa kakhulu ngokulingisa indawo kaqondi kwisibaya.
Ngaphambi kokuba abelethe, wakuveza ukuthi uyise wendodakazi yakhe nguntokozo Dlamini, olingisa umastermind kuzalo.
Uthi kuyamjabulisa ukuthi unesinqandamathe esikwaziyo ukufaka isandla ekukhuliseni ingane. “Ngibusisekile futhi ngijabule ngokuba nomuntu okwaziyo ukuba angilekelele. Uma ngenza okuthile ngiyazi ukuthi uma ekhona uyangisiza lapho kudingeka khona,” kusho yena.
Uthi ngelinye ilanga kuke kwaba nesikhathi lapho kade ekhathele kakhulu, kuthe uma ephaphama wathola uyise wengane yakhe ezama ukushintsha indodakazi yabo inabukeni.
“Ngavele ngahleka, ngambuza ukuthi wenzani, ngabe sengingenelela. Anginayo inkinga yokuthi amshintshe uma ngabe umntwana echamile ngoba kulula. Mhlawumbe uma ngimnika ithuba angakwazi ngoba ungumuntu othandayo ukulekelela,” kuqhuba ujessica.
Kuyinto eyejwayelekile ukuba abanye besifazane uma besanda kubeletha, babe nokuzenyeza ngemizimba yabo, kwazise basuke bengasayijwayele iyilokho esuke isiyikho. Ujessica uthi okwamanje akakagxili ekubuyeleni emzimbeni wakhe wakudala ngoba usakhulisa umntwana.
“Ngicabanga ukuthi ukuncelisa ibele kungisizile ngoba umzimba uyazibuyelela esimeni, kanti noNkulunkulu usidale kahle thina besifazane ngoba ukhuluphala manje kuthi emuva kwesikhathi uphinde ubuyele esimeni sakho.
"Angifuni ukuqamba amanga, okwamanje angijimi, ngigxile kunamisa. Angizivocavoci ngincip h e ngokwendalo, yize ngingakabi yilesiya
slender ebengiyiso.” esho ehleka. Uthi unovalo lokubuyela emsebenzini emuva kokuthatha ikhefu. Echaza ngokushintshile selokhu ethole umntwana, uthe: “Angisiye umuntu ohlalayo angenzi lutho, le nto yokuhlala yintsha kimina. Ukufika kukaNamisa kulethe ushintsho ngoba sengiyakwazi ukuzinza,” kuqhuba yena. Uchazele ILANGA Langesonto ukuthi igama lendodakazi yakhe elithi Namisa, lichaza intokozo, okuyinto athi ibalethele injabulo. tzondi@ilanganews. co.za
UJESSICA Nkosi uthi umuzwa wokuba ngumama kanamisa ungefaniswe nalutho.